iPhone X Mockups | Famoronana an-tserasera
Mockups dia fomba tena ilaina hijerena ny asa famolavolana, indrindra rehefa te hanome azy sary matanjaka kokoa ianao. Mazava fa ny mockups koa dia miovaova arakaraka ny fironana sy ny fivoaran'ny teknolojia, samy manana ny fitakiana izy ireo arakaraka ny vokatra eny an-tsena. Sarotra indraindray ny mahita môdely manokana rehefa mitady modely manokana ianao. Izany no antony, tamin'ny lahatsoratra androany, nanao fanangonana ny iray amin'ireo finday lafo indrindra hatramin'izao: iPhone X.
Mazava fa ny endrika iray dia toa tsara tarehy kokoa miaraka amin'ny mockup kalitao ary mainka fa raha avy amin'ny marika iray fantatra amin'ny anarana hoe Apple. Izany dia hampiakatra ny drafitrao amin'ny ambaratonga hafa, izay mety tsy ho vitanao amin'ny modely hafa. Ny mockup izay zaraiko eto ambany, atao amin'ny photoshop ny ankamaroany ka azo ovaina tanteraka. Ny sasany dia mitaky attribution fa zavatra tsy misy fandaniana na inona na inona, satria asan'ny olon-kafa. Ity ambany ity ny safidin'ny pejin-tranonkala sy ny fanesoana kely ho an'ny iPhone X, avy amin'ireo pejy ireo.
1 World Mockup
1.0.3 Mockup miaraka amin'ny aloka ho an'ny iPhone X
1.0.4 Mockup iPhone X mitsingevana miaraka amin'ny Reflection
2.2 Mitazona iPhone X ny tanana
3.2 Mockup tanana (Mockups iPhone + MacBook)
Mockup World dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo pejy tsara indrindra hisintonana mockups avo lenta. Misy tranga izay tsy maintsy raisinao ny fahazoan-dàlana, satria ny sasany dia natao ho an'ny tena manokana ihany, fa izany dia amin'ny antsipiriany hatrany amin'ny famaritana ny mockup. Amin'ny tranga ratsy indrindra, tsy maintsy manonona anarana ny mpanoratra fotsiny ianao, hanome azy voninahitra amin'ny asany ary ho afaka hampiasa ny mockups.
Ity mockup ity dia manana fijery anoloana ny iPhone X amin'ny mainty. Misy rakitra PSD, izay adika amin'ny kalitao avo lenta. Mirefy 4000 x 3000 x px izy io. Ary manana vahaolana 300 dpi izy io. Toy izany koa misy zavatra marani-tsaina, izany dia hanamora ny fanitsiana azy. Azonao alaina ao amin'ny ity rohy ity
Fonosan'ny mockups aiza izy io ny iPhone X dia amin'ny toerana samihafa. Ny tsirairay amin'ireo rakitra dia 3000 x 3000 px, azo ovaina tanteraka, misy sosona ary misy zavatra marani-tsaina. Eto ianao manana ny rohy fampidinana.
Mockup miaraka amin'ny aloka ho an'ny iPhone X
Ity mockup ity dia natao ho an'ny famelabelarana fampiharana sy famolavolana tranonkala. Izany dia fisie psd, ny loko ambadika dia azo ovaina tanteraka, miaraka amin'ny zavatra marani-tsaina. Izy io dia manana refy 2362 x 1653 px ary famaha 300 dpi.
Mockup iPhone X mitsingevana miaraka amin'ny Reflection
amin'ity mockup ity dia ho afaka ny hahita ny anoloana sy aoriana ny iPhone X. Ny endri-javatra manaitra ity mockup ity dia ny ny iPhone dia mitsingevana eny amin'ny rivotra. Miaraka amin'ny sosona marani-tsaina amin'ny rakitra PSD dia ho afaka hanova ny sary ambadika ianao. Ny habe dia 1723 x 1743 px.
Freepil dia a tranokala misy loharanon-tsary maherin'ny 10 tapitrisa, izy rehetra dia manana kalitao avo lenta. Azonao atao ny mahita ny zava-drehetra manomboka amin'ny sary, sary ka hatramin'ny rakitra PSD azo ovaina tanteraka. Tena mora ampiasaina izy io, satria amin'ny fanoratana izay tadiavinao fotsiny, ity milina fikarohana ity dia hanao fanangonana ny singa rehetra mifanaraka amin'ny fikarohanao. Azo antoka fa anisan'ireo loharano 10 tapitrisa mahery ireo, ho hitanao izay tadiavinao.
Amin'ity mockup ity dia afaka mahita ny iPhone X eo amin'ny toerana anoloana ianao. Raha izay tadiavinao dia a famolavolana minimalista, miaraka amin'ny loko tsy miandany no modely mety aminao. Araka ny efa nolazaiko teo aloha dia misy ny môdely izay mitaky attribution amin'ny mpanoratra. Ity indrindra no iray amin'izy ireo, azonao atao ihany koa ny mandoa ny dikan-tsarimihetsika premium an'ny Freepik mba hialana amin'ny filazana ny mpanoratra, fa miankina aminao izany. Avelako ho anao ny rohy fampidinana.
Mitazona iPhone X ny tanana
Araka ny efa novakianao tamin'ny lohateny fanesoana ity dia tazonin’ny tanana iray. Matetika, ny fampidirana ampahany amin'ny vatan'olombelona dia miteraka fahatsapana ho akaiky. Samy azo ovaina tanteraka ny lokon'ny lamosina sy ny lamosina amin'ny efijery finday. Eto ianao ny rohy télécharger azy.
Dribble dia a vondrom-piarahamonina virtoaly an-tserasera ho an'ny mpamorona sary. Izy io dia miasa ho sehatra fampiroboroboana ny tenany ho an'ny karazana asa famoronana rehetra: famolavolana sary, famolavolana tranonkala, sary na sary, ankoatra ny hafa. Izy io dia noforonin'i Dan Cederhol sy Rich Thornett tamin'ny taona 2009. Mba hahafahana mampiasa azy dia tsy maintsy misoratra anarana fotsiny ianao, maimaimpoana tanteraka ny fisoratana anarana.
Raha izay tadiavinao dia a iPhone X mockup fotsy, izany no idealy. Izy io dia môdely kanto, izay hisongadina amin'ny endrikao. Ity ny rohy fampidinana.
Mockup tanana (Mockups iPhone + MacBook)
Nanapa-kevitra ny hamorona ity mockup ity miaraka amin'ny tanjona roa ireo mpamorona ity mockup ity, te-haneho tena fanehoana ny hoditra izy ireo. Nandeha lavitra izy ireo mba hampidirana ny taona, ny lahy sy ny vavy ary ny karazana vatana. Afaka milaza isika fa mockup inclusive izany. ity môdely ity misy mockup MacBook ihany koa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Iphone X Mockups
Ohatra amin'ny animation CSS
Ahoana ny fisafidianana ny endri-tsoratra ho an'ny lohateny